ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြားထဲက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပဦးမယ့် Clash Royale ပြိုင်ပွဲ – MyTech Myanmar
ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြားထဲက တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပဦးမယ့် Clash Royale ပြိုင်ပွဲ
၂၀၂၀ ခုနှစ်ဟာ နှစ်စကတည်းက ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့် Esports နဲ့ နည်းပညာ ပွဲကြီးများစွာကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ရပြီး အကုန်လုံး အွန်လိုင်းကနေပဲ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Clash Royale League (CRL) ကတော့ ကပ်ဘေးတွေ ကြားထဲမှာတောင် ခေါင်းမာမာနဲ့ ကျင်းပယှဉ်ပြိုင်ဦးမယ့် ပုံပါပဲ။
CRL ဟာ သူတို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၅ – ၆ ရက်တွေမှာ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ လိုတော့ လိုသေးပေမယ့် အခုလို ကြိုတင်ကြေညာခဲ့တာဟာ အတော်လေး ရဲရင့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။
It’s OFFICIAL! The CRL World Finals is headed to Shanghai, China this December 5-6! 🏆
More info + teaser clues revealed here: https://t.co/V1j5Fa2hm7 #ClashRoyale #CRLWorldFinals pic.twitter.com/OCtv154WWR
— Clash Royale Esports (@EsportsRoyaleEN) July 29, 2020
“COVID-19 ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ခရီးသွားလာမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အထူး အခြေအနေ ကြုံတွေ့နေရတာကို အပြည့်အဝ သိနားလည်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေး၊ လက်မှတ်ရောင်းချမှုနဲ့ အားပေးမယ့် ပရိသတ်တွေ စတာတွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးသွားပါမယ်” လို့ CRL ရဲ့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ CRL East နဲ့ CRL West ဆိုပြီး ဒေသနှစ်ခုကနေ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ အသင်း ၈ သင်းဟာ စုစုပေါင်း ဆုကြေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ သိန်း အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က CRL World Finals မှာတော့ နာမည်ကျော် Esports အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Team Liquid ကပဲ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
Clash Royale ဂိမ်းဟာ သူတို့ရဲ့ World Finals ပွဲစဉ်တွေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်က လန်ဒန်၊ ၂၀၁၈ မှာ တိုကျိုနဲ့ ၂၀၁၉ မှာ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြို့တွေမှာ ကျင်းပယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာ ကတ်အသစ် Mega Knight ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး လာမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ အရေးပါတဲ့ ကတ်တစ်ကတ် ဖြစ်လာမှာပါ။
MyTech Myanmar2020-08-04T14:40:58+06:30August 4th, 2020|Esports, Gaming, News|